भायनेटको अर्को दादागिरी छताछुल्ल : आफ्नो इन्टनेटको लाइन जोड्दा अरु कम्पनीको तार काट्ने गरेको खुलासा !
ARCHIVE, COVER STORY, SPECIAL » भायनेटको अर्को दादागिरी छताछुल्ल : आफ्नो इन्टनेटको लाइन जोड्दा अरु कम्पनीको तार काट्ने गरेको खुलासा !
काठमाडौँ- पछिल्लो समय भायानेटको दादागिरी बढिरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला भायानेटका कर्मचारीको यस्तै अर्को दादागिरीको खुलासा भएको छ । जथाभावी तार टाँगेर शहरलाई कुरूप बनाएको भन्दै पछिल्लो समय सबैभन्दा झुर सेवा दिने र जनतालाई ठग्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको नाममा कुख्यात भएको भायानेटका कर्मचारीहरुलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएपछि यस्तो खुलासा भएको हो । इन्टरनेट जोड्दा तार जडान गर्ने क्रममा अरुको तार काट्ने, र आफ्नो तार जोड्ने गरेको आरोपमा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । यता जथाभावी तार काटेर आफ्नो टाँग्दा पनि शहरलाई कुरूप र जोखिमपूर्ण बनाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका-१६ ले भायानेटका कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर आगामी दिनमा यस्तो नगर्न भन्दै सचेत गराएको छ ।
बालाजु बाइपास क्षेत्रमा तारको काम गरिरहेका बेला कामपा- १६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निर्देशनमा भायानेटका कर्मचारी समातिएका हुन् । आफ्नो काम गर्ने क्रममा अरुलाई असर नपुर्याउन भन्दै भायानेटका कर्मचारीलाई सचेत गराइएको हो । यता बिहिबार विहान ११ बजे, इन्टरनेट एसोसीएसन् अफ्न नेपालका संयोजक विनोद जोशीको नेतृत्वमा कम्पनीका प्रतिनिधि वडा कार्यालय पुगेर वादाधय्क्षसँग आफ्ना समस्या बुझिदिन भन्दै आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्ने भन्दै माफीसमेत मागेका थिए ।
भायनेटका एमडीलाई खुलापत्र, 'लुट्नु नै छ भने बन्दुक बोकेर हिड्नुस्, किन इन्टरनेटको व्यापार गर्नुहुन्छ ?' [रिभ्यू-३]
'जिन्दगीमा दु:ख नै पाउन मन भए थुप्रै तरिका छन्, भायानेटको सर्भिस लिनु, त्योमध्ये सबैभन्दा राम्रो उपाय रहेछ' [रिभ्यू]
प्रकाशित : Friday, July 13, 2018